मोरङमा पौडेल-कोइराला पक्ष बलियो, संस्थापनका दुई सभापति मात्र विजयी
मोरङमा पौडेल-कोइराला पक्ष बलियो, संस्थापनका दुई सभापति मात्र विजयी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका पदाधिकारी र १९२ अधिवेशन प्रतिनिधि चयन
विराटनगर : नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत मोरङमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका सभापति, पदाधिकारी र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू छनोट भएका छन् ।
निर्वाचन परिणामअनुसार काँग्रेस संस्थापनभन्दा कोइराला-पौडेल समूह बलियो देखिएको छ । जिल्लाभर जम्मा १२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा देउवा पक्षीय दुई जना सभापति मात्र विजयी भएका छन्।
मोरङका १२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चार वटामा सर्वसम्मत भएपछि थप आठ वटामा सभापति चयन गर्न शनिवार निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। साँझदेखि नै मतगणना आरम्भ भएको थियो। आइतबार बिहान प्राप्त मत परिणामअनुसार मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ 'क' मा नरबहादुर तामाङ र 'ख' मा राजकुमार लामा निर्वाचित भएका छन् । लामा सर्वसम्मत भएका हुन । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ 'क' मा कन्यैहालाल राजवंशी र 'ख' देवेन्द्र बस्नेत विजयी भएका छन् । कन्हैयालाल सर्वसम्मत भएका हुन ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ 'क' गङ्गा याक्खा र 'ख' जगतलाल चौधरी, क्षेत्र नम्बर ४ 'क' मा एकाराम माझी र 'ख' मा सुबोध निरौला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ 'क' अचानु खाँ गन्गाई र 'ख' जितु साह विजयी भएका छन् । उनीहरू सर्वसम्मत भएका हुन । काँग्रेस नेता अमृत अर्यालको समर्थन र सहयोगमा निर्वाचित उनीहरू देउवा पक्षका उम्मेदवार हुन् ।
मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ 'क' दीपक भगत र 'ख' मधुवाबु तिवारी विजयी भएका छन् । निर्वाचनबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सभापतिसहित पदाधिकारी निर्वाचित भएको मोरङ काँग्रेसका सचिव मोदराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । घिमिरेका अनुसार मोरङको मत परिणामअनुसार जिल्लामा पौडेल-कोइराला समूह दह्रो देखिएको छ । निर्वाचनबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट १६ जना प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। जिल्लाबाट जम्मा १९२ जना अधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्न मत खसाल्ने छन् ।
मोरङ काँग्रेसका अनुसार जिल्लामा जम्मा ३५५१ क्षेत्रीय प्रतिनिधि विजयी भएका थिए । प्रदेश प्रतिनिधि र पदाधिकारी चयन गर्न तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतले मत खसालेको पार्टी सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। मोरङको क्षेत्र नं १ 'क' २८३ र 'ख' मा ३७६, २ 'क' २९८ र 'ख' मा ३८४, ३ 'क' २५९ र 'ख' २६०, ४ 'क' ३५२ र 'ख' मा ३३८, ५ 'क' २४६ र 'ख' १९७, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ 'क' ३०४ र 'ख' मा २५४ मतदाता थिए ।
मोरङको निर्वाचनमा केन्द्रीय नेताहरू महेश आचार्य, डा. शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल र अमृत अर्यालको खास भूमिका रह्यो । केन्द्रीय नेताहरूले आफू पक्षधर सभापति तथा प्रतिनिधि चयन गराउन पहल र प्रयास गरेका हुन ।
कतिपय क्षेत्रमा मोरङ काँग्रेस सचिव नागेश कोइराला र काँग्रेस संसदीय दल १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचेतक तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की पक्षधर उमेदवारबीच पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । दुवै नेता एउटै खेमाका भए पनि पालिका तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको चुनावमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।
काँग्रेस महाधिवेशन : सुनसरी २ (क) मा सुवेक्छु देवानको प्यानलै विजयी
सुनसरी क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा कार्यसमितिको मतगणना जारी : (क) बाट अनिल श्रेष्ठ र (ख) बाट मुरारी भट्टराईको अग्रता